नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल,कतिसम्म छ रेट ? हेर्नुहोस – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजननेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल,कतिसम्म छ रेट ? हेर्नुहोस
नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल,कतिसम्म छ रेट ? हेर्नुहोस
February 9, 2021 admin मनोरंजन 15213
सांकेतिक तस्बिर- मंसिर १७ को साँझ किशोरी घरमा एक्लै थिइन् उनका दुई बहिनी बाहिर कतै गएका थिए । आमा घरमा मोबाइल छाडेर घाँस का,ट्न जङल गएकी थिइन् ।
औषधि कोठा भित्र छ लिएर जाऊ’ भनेपछि भित्र पसिन् । त्यही मौकामा आफूलाई ब-ला,त्का-र गरेको उनको भनाइ पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस ।
छिमेकीको फोन आयो,औषधि लैजान बोलाएपछि उनी छिमेकी धर्मेन्द्र चन्दको घर गइन्, धर्मेन्द्र ड्राइभर भएकाले उनकी आमाले औषधि मगाएकी थिइन् । उनलाई धर्मेन्द्रले ‘औषधि कोठा भित्र छ लिएर जाऊ’ भनेपछि भित्र पसिन् । त्यही मौकामा आफूलाई ब-ला,त्का-र गरेको उनको भनाइ छ ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
उनले भावुक हुँदै भनिन ‘घरमा त्यो ए,क्लै रहेछ,मलाई स-मातेर ब-ला,त्का-र गर्‍यो,’ ‘एक पटक त क-राएँ पनि, पछि मुख थु-निदियो  ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
त्यसपछि पनि आमाको मोबाइलमा फोन गरेर धर्मेन्द्रले मा-र्ने ध-म्की दिने गरेका थिए । शा-रीरिक र मा-न-सिक पी,डा भो,गिरहेकी उनलाई पुस १५ को साँझ धर्मेन्द्रकी बहिनी बोलाउन आइन् ।बाँकी भि’डियोमा हेर्नुहोस् पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
जोखिम भत्ता नपाउँदा वीर अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलित काठमाडौँ । जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । वीर अस्पतालमा कोरोना भाइरस कोभिड—१९ संक्रमितको उपचारमा खटाएका २०० जना आवासीय चिकित्सकहरूले बिहीबार आन्दोलन गरेका हुन् ।आवासीय चिकित्सकहरु आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवामा सरिक नभइ अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएका छन् । संक्रमितहरूको उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई कोभिड—१९ जोखिम भत्ता नदिएपछि आन्दोलित भएका हुन् ।
अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कोभिड बिरामीको उपचारमा संलग्न भएपनि जोखिम भत्ता दिन नसकेको वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले बताए । अस्पतालसँग बजेट नभएकाले सबैलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । यसअघि अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बजेटको अभाव देखाउँदै एक महिनाको मात्रै जोखिम भत्ता दिएको छ । पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, भिडियो, मनोरंजन, समाचार 101499
April 29, 2021 admin मनोरंजन 13001
August 2, 2020 Administer मनोरंजन, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 47621